Martiqaad iyo soo dhawayn diiran school keenii Sommerschule - tun.starthilfe
Martiqaad iyo soo dhawayn diiran school keenii Sommerschule
Sommerschule waxaa uu idinka caawindoona luqada jarmalka ,waxaanan martiqaadaynaa qofkasta danaynaya oo doonaya luqada jarmalka . waxaanu socondoonaa laba usbuuc goobtuna waa jamacada Eichstätt halkii uu ahaa sanadkii hore. hadaf kuna waa sidii aanu idinka caawin lahayn labada usbuuc luqada jarmalka iyo waxa raaca farsamo gacanta . heerka casharadu ay ku bixi doonan waa sida buuga A1 iyo A2. Waxaana uu bilaabmayaa schoolku ka bilaabanta 16. Ilaa 30 ka bisha August maalmaha ladhigandoono isniin ila jimce . intiina aan daganayn eicstätt ee ka baxsan ama ka fog waxaan idin siin doona tikidho bas aad ku timaadaan .
Sida caadiga ah subaxdii xiisado luqada jarmalka ah duhurkina qado idiin diyaara ,waxaana qadada kadib idiin raacsan farsamada gacanta iyo barnaamijyo ku saabsan dhaqamada diimaha iyo wada noola´an shaha iwm.
Hadaba lacag ma yahy schoolku ? ha qofwalba oo jecel inuu kasoo qayb galo waxaa uu bixin doona qofka kaliga ah 30 yuuro familaga 40 yuuro waxana intaa raacsan 10 yuuro oo qofwalba bixin doono una soo noqon doonta.
Waxaa jira dad badan oo sanadkii hore qaatay tikidho oo aan dib ugu soo noqon oo tikidhadaa isticmaalay schoolkiina aan iman waana laga wanaagsan yahay.
Hadaba intiina xiisaynaysa fadlan ha isoo diwaan galiyaan maalinta ay bishu tahy 15 july .
Hamoogaanina waa inoo iyo bisha july
Waxan ku faraxsanandoona inaad nagala soo qayb gashaan in sha allah .
BITTE AUF DEUTSCH AUSFÜLLEN
Anmeldung 2017 Einzelperson.pdf
Anmeldung 2017 Familie.pdf
Imtixaanka Meelaynta Jarmal
Einstufungstest Sommerschule 2017.pdf
© tun.starthilfe für flüchtlinge 2016